Enwere m ụtụ isi. Kedu otu esi egbochi ụtụ ahịa n'ahịa m? - DataNumen
Anyị na-eji MyCommerce.com na FastSpring.com ijikwa azụmahịa anyị n'ịntanetị.
Ọ bụrụ na ị nye iwu site na MyCommerce.com, mgbe ahụ ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ maka ụtụ isi ahịa na usoro gị na mbụ. Mgbe emesịrị iwu ahụ, zipu akwụkwọ asambodo ụtụ isi gị ma ọ bụ VAT ma ọ bụ GST ID dị mma, mgbe ahụ anyị ga-akwụghachi gị ụtụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị nye iwu site na FastSpring.com, mgbe ahụ ị nwere ike gbochie ịnakọta ụtụ na iwu gị site na ịnye VAT ma ọ bụ GST ID gị dị mma n'oge nzụta. Ala VAT ma ọ bụ GST ID nwere ike ọ gaghị adị dabere na obodo gị. Mba si America enweghị mpaghara VAT / GST ID ebe ọ na-anaghị emetụta:
Mgbe ahụ mba si Europe ma ọ bụ Eshia ga-enwe ubi VAT / GST ID, dị ka n'okpuru:
Nwere ike pịa "Tinye VAD ID" ma ọ bụ Tinye GST ID "iji tinye VAT / GST ID ya.Ọ bụrụ n’ichezọ itinye VAT / GST ID gị n’usoro gị, ma ọ bụ naanị ị nwere asambodo na-anaghị atụ ụtụ isi, mgbe ahụ ị nwere ike ịtụ ụtụ isi ahịa. Na mgbe a kwadoro iwu ahụ, kpọtụrụ anyị ịkwụghachi ụtụ isi.
ịzụta, GST, iji, zuo, ụtụ ahịa, anaghị atụ ụtụ, VAT
Kedu ihe ga - eme ma m zipụ iwu ahụ?You na-enye mwelata ego?